Kazakstan: Adihevitra Manodidina ny Famadihana ho Latina ny Fiteny Kazakhe · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Fanny Campion
Voadika ny 11 Avrily 2018 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2013)
Mikasa ny hamadika ny fitenim-pirenena ofisialy amin'ny abidia latina i Kazakhstan. Io fiampitàna io, araka ny nambara, dia tsy mety haharitra “12 hatramin'ny 15 taona”. Araka ny voasoratr'i adam_kesher, niteraka adihevitra marobe io tetikasa io – indrindra ny tao Rosia sy tamin'ny ampahan'ny mponina miteny rosiana ao Kazakhstan, toerana ijerena ity fiampitàna ity ho toy ny tsy mitondra soa ho azy ireo. Kanefa, mankasitraka kokoa ity fijery ity ireo blaogera mikasika :
Mety ahafahana manatsotra ny fitsipitenenana izy io, manafohy ny isan'ireo litera ary koa manamora ny fitahizìrizana ny fiteny ho amin'ny endrika niomerika, izay mitarika azy ho mora vakiana manerantany ary hanatsara ny haavon'ny fanabeazana ao amin'ny firenena – raha ohatra ka mitahiry ny maha-izy azy ny fiteny rosiana.
Zavatra roa kosa anefa no mampanahy aminy; voalohany, tsy asian'ny governemanta vidiny ny isan'ireo taona ilaina ho amin'io fiovàna io: mipoitra mazava tsara fa ny fikarohana siantifika, ny fanarahamaso, ny fanadihadiana ary koa ny fandikàna ireo literatiora klasika kazakhs sy erantany ho amin'ny fiteny Kazakh vaovao dia tsy voaray tanatin'ireo kajikajy. Manaraka izany, noho ny antony tsy hay, ny modely ozbeky, tena tsy misy mpitia, io nofidiana ho amin'ny fiampitàna io.
Mampientana sy goavana ny fihetsiky ny tontolon'ny bilaogy. Tsara amin'ny ankamaroany ireo fijery ivelan'i Kazakhstan.
Ho an'i Dave, tiorka mpianatra iray, mety hahafahana mamaky ireo sisintany momba ny fiteny manerantany io famadihana ho teny latina io. Ampoizin’ i A-Guest fa io zotra mankany amin'ny famadihana ho teny latina io dia fanovàna miverina amina abidy sirilika efa ho ampolo taona lasa izay. Vokatr'izay, mamaly bebe kokoa an'ireo antony ara-politika na toekarena ireo fanovàna roa ireo raha oharina amin'ny antony ara-pitenenana. Mandritra izany fotoana izany, manamafy izy fa ny famadihana ho teny latina no fomba tokana hametrahana elanelanana amin'ny dindo rosiana.
Araka ny voalazan'i Ataman_Rakin, olana ao Kazakhstan io dindo io. Maherin'ny ampahatelon'ny mponina no manana fiaviana rosiana avokoa, ary mbola betsaka ihany koa ny Kazakhs no azoheverina ho rosiana, raha toa maro amin'ireo kazakhs an-tanàndehibe no maka avy hatrany ny teny rosiana ho tenin-dreny. Tohanany ny hevitra hoe mety ho tombony ny famadihana ho teny latina ny fiteny Kazakh sady manamafy ny maha-kazakh ary lavidavitra kokoa ny firenena kazakh.
Fa ao anatin'ny firenena, mipetraka ny fisalasalan'ireo blaogera.
Adam, miahiahy, mahatsinjo io drafitra io ho tsy inona akory fa sompatra iniana atao, na hangalaram-bola, na hanilikilihana an'io hevitra io, na ihany koa izy roa ireo mitambatra. Mampitandrina i Aslili fa tsy zavatra tsara ny filalaovana fomba fiteny: “Afaka mianatra ny zavatra rehetra ny olona, fa mety hampididoza ny fanaovana izany mianga amin'ireo fandikana an'ireo modely ratsy”. Mihevitra i Cheerful-Husky fa heloka manoloana ny tantaran'ny Firenena ny fanovàna ny soratra, na ohatra aza talohan'ny fampidirana ny endri-tsoratra sirilika tamin'ny taona 1940, nampiasa ny abidia latina ireo Kazakhs. Tsy mankasitraka i Pacifisttt. Ohariny amin'ny fandaniam-potoana sy fandaniam-bola ny famadihana ho teny latina, ampian'ny fikorontanana goavana, noho ny fanandratana ho ambony ny fanambaniantenan'ny iray firenena.
Mahatsiaro kokoa ho voakitiky ny zava-mitranga ankapobeny mikasika ny fanabeazana sy ireo siansa ao Kazakhstan i Aitazhi fa tsy ireo olana ara-politika: “hanasarotra ireo olana mikasika ny fanabeazana, ny literatiora, ny fandikanteny sy ny voambolana ny fanatontoloana ny fomba fiteny amina endrika kazakh. Iza no hikarakara azy, raha toa ratsiratsy ihany koa ireo soratra sy ireo rakibolantsika?” Manaiky i M-kaa: “Tsy mbola maika io amin'izao fotoana izao. Ratsy fitontona ny fotoana mikasika ny fitiavantanindrazana tafahoatra na ny fanatontoloana – misy ireo asa manandanja kokoa. Topazo maso fotsiny ireo boky mirediredy avoaka manerana an'i Kazakhstan ankehitriny”.
Tsy mankasitraka i Izumcheg: “Ny latina no ilaiko. Tsy afaka mampiasa fiteny kazakhe ireo mpampiasa finday satria tsy misy toerana ho an'ireo voanteny 42 ! Milaza ianao fa tsy tonga ny fotoana ary hisy hangalatra ny vola. Nefa rahoviana no ho tonga ny fotoana? Rahoviana no ho voaaro ny vola? Tsy ho tonga mihitsy angamba io fotoana io, dia hitoetra any ivelan'ny lalamben'ny teknolojia ireo Kazakhs.” Feno fahendrena ny famintinany.
Mba hanoratra an'io ireo rehetra liana. Any amin'ireo blaogy, ireo gazety, ireo fanohanana fikarohana teny amin'ny anjerimanontolo. Misolo tena feo iray ny tsirairay amintsika, hevitra iray, ary eto ny fanapahankevitra no raisina, eto akaikintsika. Mamaky gazety ireo mpanao politika, mijery aterineto. Izay tena ilaina, dia ny fifantohana sy ny fanehoana ireo hevitsika. Hatramin'izao, tsy misy fanantenana hoe hizotra amin'ny laoniny ny zavatra rehetra.
Fahagagana, andro vitsivitsy taorian'io adihevitra io tao anaty tontolon'ny bolongana, vaovao iray no tonga avy tao Tiorkia, toerana nanaovan'ny filoham-pirenena Nursultan Nazarbayev fitsidihana ofisialy. Hita ho maneso ny fihetsk'i Adam mikasika ny fanambaràna nataon'ny filoha: “Mety nanao fanadihadiana ampitandremana ny hevitr'ireo blaogera kazakhs, angamba, Andriamatoa Filoha, mialohan'ny nilazany fa nandroso hevitra izy ny tsy hirotorotoana haingana loatra mikasika ny famadihana ny fiteny ho amin'ny endrika latina.”
6 andro izayKazakhstan